Uhambo lweFern Life - Indlela yokuzalisa uFern
Indlela yokuzaliswa kweFern eSebenza ngayo
IiFern ziyizityalo ezinamaqabunga ezinamaqabunga. Ngelixa zineemvini ezivumela ukuhamba kwamanzi kunye nezondlo ezifana nezitshizi kunye nezityalo eziqhakazileyo, umjikelo wabo wobomi uhlukile kakhulu. Ii-Conifers kunye neentyantyambo zezimbali ziguquke ukuze ziphile kwiimeko ezinobunzima, ezomileyo. Iifama zifuna amanzi ukuvelisa ngesondo.
I-Basic Anatomy yaseFern
Amafern azinayo imbewu okanye iintyatyambo. Bazala ngokusebenzisa i-spores. Zen Ria, Getty Images
Ukuqonda ukuzaliswa kwefern, kunceda ukwazi iinxalenye ze-fern. Amagqabi asemagatsheni anamagatsha, aquka amaqabunga abizwa ngokuthi i- pinnae . Ngaphantsi kweminye i-pinnae yimihlaba ephethe iiprores . Akunjalo onke ama-frond kunye ne-pinnae ayenayo i-spores. Izigodo ezinezo zibizwa ngokuba ngamaqonga avelisayo .
Iipropathi zincinci ezincinci eziqulethe izinto eziphathekayo ezifunekayo ukuze zikhule i-fern entsha. Zingaba ziluhlaza, ziphuzi, zimnyama, zibomdaka, ziluhlaza okanye zibomvu. Iipropathi zifakwe kwizakhiwo ezibizwa ngokuba yi- sporangia , ngezinye izihlandlo zidibanisa ukwenza i- sorus (ubuninzi be-sori). Kwezinye i-ferns, i-sporangia ikhuselwe ngamabhulethi abizwa ngokuthi i- indusia . Kwezinye iiferns, i-sporangia ivuliwe emoyeni.
Ukunye okunye kwezizukulwana
Izizukulwana eziqhelekileyo zeFern njengenxalenye yobomi babo. mariaflaya, Getty Izithombe
Umjikelezo wobomi obuthile ufuna ukuba izizukulwana ezimbini zezityalo zizalise. Oku kuthiwa ukutshintshwa kwezizukulwana .
Esinye isizukulwana i- diploid , oku kuthetha ukuba ithwala iiseti ezimbini ze-chromosomes kwiselinye ngasinye okanye isizalisi esigcwele (njengefestile yoluntu). I-fern efihliweyo kunye ne-spores yinxalenye yesityalo se-diploid, esibizwa ngokuba yi- sporophyte .
I-spores's spores ayifuni ibe yi-sporophyte eneqabunga. Abafani nembewu yeziqhamo zezimbali. Kunoko, bavelisa isizukulwana sama haploid . Kwi sityalo se haploid, iseli nganye iqukethe i-chromosomes enye okanye isiqingatha se-genetic complement (njenge-sperm yomntu okanye i-egg cell). Le nguqulo ye-pant ibukeka njenge-plantlet encinci. Kubizwa ngokuba yi- prothallus okanye i- gametophyte .
Iinkcukacha zeeFiji zoBomi beFern
Le prothallus (obomvu obunobumba) inamapheshana amancinci kunye nee-rhizoids ezinobumba. Xa iqanda lixiliswa, isityalo esilumkelekayo siyakhula ukusuka kwesi sakhiwo. Nangona kunjalo, i-prothallus i-haploid, ngelixa i-sporophyte i-diploid. UJosep Maria Barres, Getty Images
Ukuqala nge "fern" njengoko siyiqonda (i-sporophyte), umjikelo wobomi ulandela la manyathelo:
I-diploid sporophyte ivelisa i-haploid spores nge- meiosis , inkqubo efanayo evelisa amaqanda kunye nesidoda kwizilwanyana kunye neentyantyambo zezimbali.
I-spore nganye ikhula ibe yi-prothallus ye-photosynthetic (i-gametophyte) nge- mitosis . Ngenxa yokuba i-mitosis igcina inani lama-chromosomes, iseli nganye kwi-prothallus i-haploid. Le plantlet incinci kakhulu kune-sporophyte fern.
Iprothallus nganye ivelisa i- gametes nge-mitosis. I-Meiosis ayifunikiyo kuba iiseli sele zikhona. Ngokuqhelekileyo, iprothallus ivelisa zombini isisu kunye namaqanda kwi-plantlet efanayo. Nangona i-sporophyte yayinama-frond kunye nama-rhizomes, i-gametophyte ineziqulatho kunye ne- rhizoids . Kwi-gametophyte, i-sperm ikhiqizwa kwisakhiwo esibizwa ngokuba yi- antheridium . Iqanda liveliswa kwisakhiwo esifana nesibizwa ngokuthi i- archegonium .
Xa amanzi ekhona, i-sperm isebenzisa i-flagella ukuba ibhukude kwiqanda kwaye iwuqhelise .
Iqanda elichumayo lihlala lixhomekeke kwi-prothallus. Iqanda liyi-zygote ye-diploid eyenziwe ngumbutho we-DNA ukusuka kwiqanda kunye nesidoda. I-zygote ikhula nge-mitosis kwi-diploid sporophyte, igqiba umjikelo wobomi.
Ngaphambi kokuba oososayensi baqonde i-genetics, ukuzaliswa kwe-fern kwakungqina kwam. Kwabonakala ngathi abantu abadala abadala bavela kuma-spores. Ngokwemvoko, oku kuyinyaniso, kodwa izityalo ezincinci ezivela kwi-spores zihluke ngokwahlukileyo kubantu abadala.
Qaphela ukuba i-sperm kunye neqanda zingenziwa kwi-gametophyte efanayo, ngoko isitya singenza umquba. Iinjongo zokuzichumisa zizinto ezincinci zilahlekile, akukho nkunkuma ye-gamete yangaphandle iyadingeka, kunye nezilwanyana ezinokuthi zilungele imo yazo zingakwazi ukugcina iimpawu zazo. Ubuncedo bokuqumba , xa kwenzeka, ukuba izixhobo ezintsha zingeniswa kwiintlobo.
Ezinye iindlela zeeFerns zizalisa
Le ngqungquthela yesithsaba i-staghorn fern iye yavelisa enye i-fern axxually. sirichai_raksue, Getty Images
I-fern "umjikelezo wobomi" ibhekisela ekuveleni ngokwesondo. Nangona kunjalo, i-ferns isebenzisa iindlela ze-asexual ukuze zivelise kwakhona.
Kwi- apogamy , i-sporophyte ikhula ibe yi-gametophyte ngaphandle kokuchumisa. IiFerns zisebenzisa le ndlela yokuvelisa xa iimeko zome kakhulu ukuvumela ukuchumisa.
IiFern ziyakwazi ukuvelisa i-baby ferns kwiingcebiso ezinzulu zeengqungquthela . Njengoko umntwana usanda kukhula, ubunzima bawo bubangela ukuba intambo iqhubekele emhlabathini. Xa umntwana usuqhambile isisu, unokuphila ngokuhlukileyo ukusuka kwisityalo somzali. Isityalo esincinci sesityalo sinezifuzo ezifanayo nomzali wazo. IiFerns zisebenzisa oku njengendlela yokuvelisa ngokukhawuleza.
I- rhizomes (izakhiwo ezinobumba ezinjengeengcambu) zinokusasazeka ngomhlaba, zivelise i-ferns entsha. Iifama ezikhulile ukusuka kuma-rhizomes nazo zifana nabazali babo. Le yindlela enye evumela ukuvelisa ngokukhawuleza.
IiFerns zisebenzisa iindlela zokuzalana zesondo kunye neendlela zokuzala.
Ekuzalweni ngokwesondo, i-haploid spore ikhula ibe yi-gametophyte ye-haploid. Ukuba kukho ukungcola okwaneleyo, i-gametophyte iyahluma kwaye ikhule ibe yi-diploid sporophyte. I-sporophyte ivelisa i-spores, igqiba umjikelezo wobomi.
Izindlela zobomi zokuzalisa ziquka i-apogamy, iingcebiso zephosti eziphosayo kunye ne-rhizome ekusasazeni.
Umsebenzi weChloroplast kwi-Photosynthesis
Izicwangciso zeCAM: Ukusinda eDangeni
I-Phytoremediation: Ukucoca Umhlaba Ngeentyatyambo?
Ukuchaswa Okukwenziwe KwiziMveliso: Ngaba Izilwanyana Zakho Zidinga I-Aspirin?
Indlela yokufumana iQela leNkxaso yeHomeschool (okanye Qala eyakho)
Umbhalo wesiHlomelo sesi-2 soMthethosisekelo wase-US
Umzekelo Isivakalisi seLwimi Jonga
Idlalwa njani umdlalo weNqaku leGalofu leNqununu
Ezilishumi eziphezulu zidinga ukwazi iindaba malunga nama Casino
Indlela yokubhala i-Ode